Ungadzokera sei kuIOS 12 nekubvisa iyo iOS 13 Beta | IPhone nhau
Maitiro ekudzokera kuIOS 12 nekubvisa iyo iOS 13 Beta
iOS 13 uye iPadOS zviri kukonzera kutekenyedzwa nenhau dzadzo uye vashandisi vazhinji vari kukurudzira kuzviisa pamidziyo yavo izvozvi nekuti Ruzhinji Beta ruripo. Asi chokwadi ndechekuti kwezuva nezuva hazvikurudzirwe kushandisa Beta pane yako nhare mbozha, iPhone kana iPad Nekuti, seyese Beta, kukundikana kwesystem pachayo uye nezvemaapplication iwe aunoisa anowanzoitika.
Unogona here kudzokera kuIOS 12 mushure meiyo iOS 13 Beta yaiswa? Iko hakuna dambudziko, inzira yakachengeteka uye yakapusa, asi Pane zvimwe zvekufunga zvaunofanira kuziva usati watora danho iri. Isu tinotsanangura zvaunofanirwa kuchengeta mundangariro pamwe nematanho ekutevera kuti udzokere kuIOS 12 kubva kuIOS 13 Beta.
1 Mapfundo akakosha ekuchengeta mundangariro usati wadzoka
1.1 Negadziriro yeparutivi iPhone kana iPad
1.2 watchOS 6 haishande pane iOS 12
2 Maitiro ekudzikisira kubva kuIOS 13 kuenda kuIOS 12
2.1 Kudzorera maitiro
2.2 Dzosera mudziyo
Mapfundo akakosha ekuchengeta mundangariro usati wadzoka
Sezvatiri kutaura, kudzokera kuIOS 12 kunogoneka uye kuri nyore, asi pane zvimwe zvekutanga zvaunofanira kuziva uye izvo, mune dzimwe nguva, zvinogona kukuita kuti ufunge kudzoka kuIOS 12. Imwe ndeye backup yemuchina wako, uye imwe yacho ine chekuita neako Apple Watch.
Negadziriro yeparutivi iPhone kana iPad
Ma backups awakagadzira panguva yeBeta haashande kana uchinge wadzokera kuIOS 12, saka Kana iwe usina kuita backup usati wagadzirisa kune iOS 13 Beta, paunodzokera kuIOS 12 unenge uine foni yakadzorerwa, yakachena, kunze kwebhokisi chete.
Kana iwe uri mumwe wevaya vanoshandisa iCloud kusevha ako mafoto, vanobata, manotsi, mafaera, nezvimwe izvi zvinongoreva kuti uchafanirwa kugadzirisa zvese neruoko uye kudzoreredza izvo zvinoshandiswa, asi unenge usina kurasikirwa nedata. Kana ukasashandisa iCloud saka chenjera chaizvo nekuti iwe ucharasikirwa neese pane yako nhare kunze kwekunge iwe wakashandisa imwe backup system. Ita shuwa kuti data rako rakachengetedzwa musati waenderera nemaitiro.
watchOS 6 haishande pane iOS 12
Rimwe dambudziko sekutaura kwatakaita rine chekuita neApple Watch. Kana iwe wagadziridza kuOSOS 6, hapana kudzokera kumashure apa. Ichi chikonzero nei Apple isingasanganisi iyo Apple Tarisa muchirongwa chayo cheRuzhinji Betas. Kana iwe ukashandisa nhoroondo "muchivande" kuisa wachi yako kune ino nyowani Beta vhezheni, iwe unoshurikidzwa kuenderera uchishandisa kusvikira iyo yepamutemo vhezheni yaburitswa.
Uye izvi zvinoreva kuti yako iPhone inofanirwa kunge iri paIOS 13 nekuti zvikasadaro Apple yako haishande ne iPhone yako. Kazhinji, haugone kana kuvabatanidza, asi kana uchikwanisa, hazvishande zvakanaka kwauri.. Kunze kwekunge iwe uchida kuchengeta yako Apple Watch mudhirowa kusvikira iyo yepamutemo vhezheni yaburitswa, rairo yangu ndeyekuti uremberere paIOS 13 pane yako iPhone.
Maitiro ekudzikisira kubva kuIOS 13 kuenda kuIOS 12
Maitiro akareruka kana iwe ukatevera nhanho dzatinotsanangura pazasi. Chekutanga pane zvese unofanirwa kuve nechokwadi chekuti une Tambo yemheni yakasimbiswa (kana iri Apple yekutanga zvirinani) uye kuti iwe une iTunes yakaiswa uye yakagadziridzwa kune yazvino vhezheni inowanikwa. Ukasangana nezvinodiwa izvi, unogona kutanga maitiro.
Iwe unofanirwa kubatanidza yako iPhone kana iPad kune komputa uchishandisa iyo USB kune Mheni tambo, uye iine iTunes yakavhurika chiise mumamiriro ekudzosa. Kuti usvike pane ino modhi unofanirwa kuteedzera inotevera mirairo:
Kana yako iPad iine Chiso ID: tinya uye nekukurumidza kuburitsa vhoriyamu kumusoro bhatani, wobva waita zvimwe chete nevhoriyamu pasi bhatani, uye wobva wadzvanya wobata on / off bhatani kusvikira iyoadad inopinda yekudzosa maitiro.
Zve iPhone 8 uye gare gare: Kurumidza kudzvanya uye kusunungura vhoriyamu kumusoro bhatani, wobva waita zvimwe chete nevhoriyamu pasi bhatani, uye wobva wadzvanya wabata on / off bhatani kusvikira iyo iPhone yapinda yekudzoreredza maitiro.
Zve iPhone 7, 7 Plus, uye iPod Kubata 7: Dhinda zvese zviri On / Off uye Vhoriyamu Pasi mabhatani panguva imwe chete, uye ramba uchizvimanikidza kudzosera mode mode yekudzora.
Zve iPhone 6s kana zvisati zvaitika, iPad ine bhatani repamba, kana iPod Bata 6 uye nekumberi: Dhinda uye bata mabhatani eOn / Off neImba panguva imwe chete, uye ramba uchiadzvanya kusvikira chidzitiro chekudzorera chikaonekwa.
Paunenge uchinge uine yako iPhone kana iPad mune yekudzosa maitiro, iwe unongova nazvo tinya pakudzorera bhatani muTunes. Ita shuwa kuti iwe tinya Dzosera uye kwete Tarisa Kwekuvandudza kana Kugadziridza. Kana izvozvo zvaitwa, iwe unofanirwa kumirira kuti chirongwa chiitwe, mushure meizvozvo iPhone yako ichakubvumidza iwe kudzoreredza backup, kana iwe uchinge wazviita.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 12 » Maitiro ekudzokera kuIOS 12 nekubvisa iyo iOS 13 Beta
Kumwe kusahadzika, ndakaita backup muicloud ndisati ndaisa ios13, asi sezvo yaive yakagadzirirwa otomatiki, yakatogadzira backups mu ios13. Mubvunzo wangu ndewokuti ndikadzokera kumashure ndinenge ndawana kopi yekupedzisira yandakaita muios12? Ndatenda
Chokwadi anenge avabvisa
Kugadzirwa kwe iphone kwakawedzera mukota yekupedzisira
Aya ndiwo marongero anoita Apple Mepu kuGoogle Mamepu muIOS 13 [VIDEO]